यूहन्ना १० | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१० “तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, जो ढोकाबाट नभई अर्कै ठाउँबाट चढेर गोठभित्र पस्छ, त्यो चोर अनि लुटेरा हो। २ तर जो ढोकाबाट भित्र पस्छ, ऊ भेडाहरूको गोठालो हो। ३ ढोकेले उसको निम्ति ढोका खोलिदिन्छ, अनि भेडाहरूले उसको सोर सुन्छन्‌ र उसले आफ्ना भेडाहरूलाई नाम काढेर बोलाउँछ अनि डोऱ्याएर बाहिर लैजान्छ। ४ आफ्ना जति सबैलाई बाहिर ल्याएपछि, ऊ तिनीहरूको अघि-अघि जान्छ र भेडाहरू उसको पछि-पछि लाग्छन्‌, किनकि तिनीहरूले उसको सोर चिन्छन्‌। ५ तिनीहरू कुनै हालतमा अपरिचित मानिसको पछि लाग्दैनन्‌, बरु ऊदेखि भाग्छन्‌, किनकि अपरिचित मानिसहरूको सोर तिनीहरूले चिन्दैनन्‌।” ६ येशूले यो दृष्टान्त तिनीहरूलाई सुनाउनुभयो, तर उहाँले तिनीहरूलाई जे भनिरहनुभएको थियो, त्यसको अर्थ तिनीहरूले बुझेनन्‌। ७ त्यसैले येशूले फेरि भन्नुभयो: “तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, म भेडाहरूको निम्ति ढोका हुँ।” ८ जो-जो मेरो नामको झूटो आड लिएर आएका छन्‌, तिनीहरू सबै चोर अनि लुटेराहरू हुन्‌; तर भेडाहरूले तिनीहरूको सोर सुनेका छैनन्‌। ९ म ढोका हुँ; जो मबाट भित्र पस्छ, उसले उद्धार पाउनेछ र ऊ भित्र बाहिर गर्नेछ अनि उसले खर्कमा चर्न पाउनेछ। १० चोर त चोर्न, मार्न अनि नाश गर्नलाई मात्र आउँछ। तर म भने तिनीहरूले दीर्घ जीवन पाऊन्‌ भनेर आएको हुँ। ११ म असल गोठालो हुँ; असल गोठालोले भेडाहरूका निम्ति आफ्नो ज्यान अर्पण गर्छ। १२ तर ज्यालादारी कामदार गोठालो होइन अनि भेडाहरू पनि उसको आफ्नै होइन, उसले ब्वाँसोलाई आउँदै गरेको देख्छ र भेडाहरूलाई छोडेर भाग्छ — ब्वाँसोले तिनीहरूलाई झम्टिन्छ अनि तितरबितर पार्छ— १३ किनकि ऊ ज्यालादारी कामदार हो र उसले भेडाहरूको वास्ता गर्दैन। १४ म असल गोठालो हुँ र आफ्ना भेडाहरूलाई चिन्छु अनि मेरा भेडाहरूले मलाई चिन्छन्‌, १५ जसरी बुबाले मलाई चिन्नुहुन्छ र म बुबालाई चिन्छु; अनि म भेडाहरूको निम्ति आफ्नो ज्यान* अर्पण गर्छु। १६ “मेरा अरू भेडा छन्‌, जो यस गोठका होइनन्‌; तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनै पर्छ अनि तिनीहरूले मेरो सोर सुन्नेछन्‌ र तिनीहरू सबै एउटै बगालको अनि एकै जना गोठालोका हुनेछन्‌। १७ बुबाले मलाई यसैकारण प्रेम गर्नुहुन्छ, किनकि म आफ्नो ज्यान अर्पण गर्छु, ताकि त्यो म फेरि प्राप्त गर्न सकूँ। १८ कसैले त्यो मबाट खोसेर लगेको छैन, बरु आफै अग्रसर भएर म त्यो अर्पण गर्छु। त्यो अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ अनि फेरि प्राप्त गर्ने अधिकार पनि मसित छ। मैले आफ्नो बुबाबाट त्यस्तो अधिकार पाएको हुँ।” १९ उहाँले भन्नुभएका यी कुराहरूले गर्दा यहूदीहरूमाझ फेरि फूट उत्पन्न भयो। २० तिनीहरूमध्ये धेरैले यसो भनिरहेका थिए: “उसमा दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको छ, ऊ बौलाहा हो। तिमीहरू किन उसको कुरा सुन्छौ?” २१ अरूचाहिं भन्थे: “यो कुरा दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको मानिसको हुनै सक्दैन। के दुष्ट स्वर्गदूतले अन्धाहरूको आँखा खोलिदिन सक्छ र?” २२ त्यतिखेर यरूशलेममा समर्पणको चाड चलिरहेको थियो। त्यो हिउँदको बेला थियो, २३ अनि येशू मन्दिरमा सुलेमानको दलान भनिने ठाउँमा हिंडिरहनुभएको थियो। २४ तब उहाँलाई घेरा हालेर यहूदीहरूले सोध्न थाले: “तिमी कतिन्जेल हामीलाई अन्योलमा राख्छौ? यदि तिमी ख्रीष्ट हौ भने हामीलाई प्रस्ट भनिहाल।” २५ येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “मैले तिमीहरूलाई भनिसकें, तैपनि तिमीहरू मलाई विश्वास गर्दैनौ। मैले आफ्नो बुबाको नाममा गरिरहेका कामहरूले नै मेरो विषयमा साक्षी दिन्छन्‌। २६ तर तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ, किनकि तिमीहरूमध्ये कोही पनि मेरो भेडा होइनौ। २७ मेरा भेडाहरूले मेरो सोर सुन्छन्‌ र म तिनीहरूलाई चिन्छु अनि तिनीहरू मेरो पछि लाग्छन्‌। २८ म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु, अनि तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुनेछैनन्‌ र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजानेछैन। २९ मेरो बुबाले मलाई जे दिनुभएको छ, त्यो अरू सबै कुराभन्दा अनमोल छ अनि कसैले तिनीहरूलाई मेरो बुबाको हातबाट खोसेर लैजान सक्दैन। ३० म र बुबा एक हौं।” * ३१ उहाँलाई हान्न यहूदीहरूले फेरि ढुङ्गा टिपे। ३२ येशूले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “मेरो बुबाको तर्फबाट मैले तिमीहरूलाई थुप्रै असल काम गरेर देखाएँ। यीमध्ये कुनचाहिं कामको लागि तिमीहरू मलाई ढुङ्गा हान्न खाज्दैछौ?” ३३ यहूदीहरूले जवाफ दिए: “तिमीले गरेको कुनै असल कामको लागि हामीले ढुङ्गा हान्न खोजेका होइनौं तर तिमीले ईश्वरनिन्दा गरेकोले हान्न खोजेका हौं, किनकि मानिस भएर पनि तिमी आफू ईश्वर हुँ भनी दाबी गर्छौ।” ३४ येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “के तिमीहरूको व्यवस्थामा यस्तो लेखिएको छैन र, ‘मैले भनें: “तिमीहरू ईश्वरहरू हौ” ’? ३५ परमेश्वरको वचनले दोषी ठहराएकाहरूलाई यदि उहाँले ‘ईश्वरहरू’ भन्नुभयो र धर्मशास्त्रमा लेखिएको कुरा रद्द गर्न सकिंदैन भने ३६ मैले आफूलाई परमेश्वरको छोरा भनें भन्दैमा, जसलाई बुबाले पवित्र तुल्याएर संसारमा पठाउनुभयो अर्थात्‌ मलाई, के तिमीहरू ‘तिमीले ईश्वरनिन्दा गऱ्यौ’ भन्छौ? ३७ यदि मैले आफ्नो बुबाका कामहरू गरिरहेको छैन भने मलाई विश्वास नगर। ३८ यदि गरिरहेको छु भने मलाई विश्वास नगरे तापनि मेरा कामहरूलाई विश्वास गर, अनि म बुबासित एकतामा छु र बुबा मसित एकतामा हुनुहुन्छ भनी तिमीहरूले बुझ्न र विश्वास गरिरहन सक।” ३९ तब तिनीहरूले उहाँलाई फेरि पक्रन खोजे तर उहाँ तिनीहरूको हातबाट उम्कनुभयो। ४० त्यसैले उहाँ फेरि यर्दनपारि त्यस ठाउँमा जानुभयो, जहाँ यूहन्नाले पहिला बप्तिस्मा गराउँथे अनि उहाँ त्यहीं बस्नुभयो। ४१ अनि धेरै मानिस उहाँकहाँ आए र तिनीहरूले यसो भन्न थाले: “यूहन्नाले एउटै चमत्कार गरेनन्‌ तर यस मानिसको विषयमा यूहन्नाले भनेको सबै कुरा सत्य रहेछ।” ४२ अनि त्यहाँ धेरै जनाले उहाँमाथि विश्वास गरे।
^ यूह १०:१५ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ यूह १०:३० * वा, “एकतामा छौं।”